Ahoana no haka sy hijery kopia ny Windows 10 Cortana Data
Jul 12, 2018 AaronStuart No Comments
Cortana ao amin'ny Windows 10 dia mpanampy amin'ny aterineto lehibe saingy, toy ireo mpanampy hafa, dia mitazona ny momba anao izy. Ity misy fomba haka ny dika mitovy mba hahafahanao mamerina azy io.
Raha toa ny tolotra teknika sy ny mpampiasa nomerika dia mahatonga ny fiainantsika ho mora kokoa, ny orinasa izay manome ny serivisy dia manangona tahiry be dia be momba anao. Ohatra, ny zavatra rehetra lazainao Cortana na Alexa dia voarakitra ary voatahiry ao amin'ny orinasan'ny orinasa. Ny zavatra rehetra ataonao Facebook ary Google dia voarakitra. Ny hevitra dia amin'ny alalan'ny fanangonana ny angon-drakitrao, hanatsara ny serivisy sy hanome valiny tsaratsara kokoa ary hiatrehana ny zavatra ilainao. Amin'izany fotoana izany anefa dia manandratra ny fiainana manokana sy ny filaminana ho anao ho toy ny mpampiasa.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny ankamaroan'ny orinasa lehibe teknika manolotra fomba iray hijerena, hameno, ary hamafa mihitsy aza ny angona angon-drakitra avy amin'ny mpamaky azy. Nasehonay anao ny fomba esory ny feonao feo avy amin'ny Alexa, Google Assistant, Cortana, ary Siri. Fa raha ny momba an'i Cortana ao amin'ny Windows 10, dia tsy misy feo fehezanteny fotsiny. Raha ny marina, mety tsy hiresaka amin'i Cortana mihitsy ianao. Fa ny kopian'ny izay ampiasanao azy amin'ny alalan'ny klavier dia tahiry, toy ny anao fampahatsiahivana, Lists, ary Notes. Fa i Microsoft dia ahafahanao mahazo kopia feno ny data Cortana anao. Ity misy fijery ny fomba ahazoana ny angona sy mijery azy amin'ny Windows 10.
Download Cortana Data avy amin'ny Microsoft
Hanomboka, alefaso Fikirana> Cortana> Fahazoandàlana & Tantara ary tsindrio ny "Manova izay fantatr'i Cortana momba ahy ao amin'ny rohy".
Rehefa manomboka i Cortana, milazà kely ary tsindrio ny bokotra "Get my info". Izany dia handefa fangatahana amin'ny Microsoft fa irinao ny dika amin'ny rakitrao. Avy eo dia hahazo mailaka mitantara anao ny fangatahana angona rakitra.
Rehefa vonona ny info, dia mahazo hafatra faharoa nalefa tamin'ny adiresy mifandraika amin'ny kaontinao Microsoft ianao. Sokafy ny mailaka ary tsindrio ny rohy "Download it here".
Ny rohy dia hitondra anao any amin'ny pejin-tranonkala Microsoft hanome ny alàlan'ny CortanaExport amin'ny alàlan'ny rindrambaiko mba hanangonana sy hananganana ny angon-drakitrao. Rehefa vita ny tsindry Eny Ny rakitra zip iray misy ny angon-drakitra dia halefa - hamonjy azy any amin'ny toerana azo antoka sy azo antoka.
Sokafy ny lahatahiry zip ary mahita rakitra an-tsoratra maro ao amin'ny JSON ianao - midika izany fa afaka manokatra ny rakitra an-tsoratra ao amin'ny Notepad ianao, saingy tsy ny format malalaka indrindra.
Mba hanampiana ny famaritana ireo rakitra, afaka mampiasa ny mpijery JSON ianao. Mora ampiasaina ny safidy amin'ny aterineto codebeautify.org/jsonviewer na ny JSON Formatter avy amin'ny Bing. Fa raha toa ka mpampiasa misimisy kokoa ianao ary te-hitandro ny filaminana, dia te hampiasa fampiharana toy ny maimaim-poana ianao Notepadd ++ utility na mety hampiditra azy ao Excel.
Ity ambany ity ny ohatra iray amin'ny Bing JSON Formatter Fitaovana:
Miaraka amin'ny dikan-teny vaovao rehetra an'ny Windows 10, Microsoft dia manohy manatsara ny mangarahara momba ny angona angon-dry zareo. Indrindra indrindra amin'ny fanovana vaovao momba ny fiainana manokana ao amin'ny Windows 10 1803 na aoriana, ary fanatsarana Diagnostic Data Viewer. Mahafinaritra fa afaka mandefa ny vaovao izahay, saingy tsara raha toa ny orinasa hanome mora kokoa ny mamaky ny tatitra.
Araka ny nolazaiko teo aloha, ny serivisy an-tserasera hafa dia ahafahanao mamoaka dika amin'ny tahirin-kevitrao ary zava-dehibe ny fijerena. Ohatra, miaraka amin'ny vao haingana Fihetsiketseham-pahafahana ao amin'ny Facebook, fotoana tsara handinihana ny zavatra fantatry ny Facebook momba anao (izay zavatra rehetra, tena). Ataovy azo antoka ny mamaky ny lahatsoratra momba ny fomba Mamaky dika mitovy amin'ny rakitra Facebook anao ary koa hoe ahoana Afaho ny angoninao Instagram - izay ihany koa ny orinasan'ny Facebook.
Raha toa ka mpampiasa mavesatra ao amin'ny Google ianao dia vakio ny lahatsoratra momba ny fomba alao ny data rehetra avy amin'ny Google. Ataovy azo antoka koa ny famerenana ny fanaraha-maso vaovao momba ny fiainana manokana Ny tontolon'ny Google ataoko. Ary, raha reraky ny mpandahateny mahay sy mpihaino dizitaly mihaino hatrany ianao, vakio ny lahatsoratra momba ny fomba Atsaharo ny Google Assistant, Siri, Cortana ary Alexa avy amin'ny fihainoana mavitrika. Ary ny lahatsoratra tahaka izao dia tsy ho feno raha tsy ampahatsiahiviko ny rehetra izany Ny fahafaham-po no fahavalon'ny fiarovana ary mila izany manaova fanamarinana roa na aiza na aiza misy azy.
Ny Windows Free 10 Upgrade Offer dia tapitra amin'ny 15 Days
Uh Oh, Windows 10 Update KB3176934 no nanapoaka PowerShell
Ahoana no fomba ahafahako manova ny rindran-kiheba ao amin'ny Windows 10?
Ahoana ny fomba fanoratana indray ny Windows Store ao amin'ny Windows 10?
Ny new Windows 10 beta fanorenana Microsoft dia manatsara ny tadin-dokam-barotra, ny fanavaozana ny sary, ary ny fampiofanana ...
Ahoana ny famerenana ny Windows 10 Apps
Ahoana ny fomba hanovana ny Windows 10 mozika fanombohana mora maivana
Ahoana ny famoahana ny official Windows 10 ISO avy amin'ny Microsoft
Scratch: fitaovana enti-miasa malalaka mba hianatra programa ordinatera
Windows 10 Tip: Manindry na mivoaka ny fonosana amin'ny PDF
Ny tsara indrindra Windows 10 Software for Better Audio
RedNotebook 2.8 dia navotsotra tamin'ny aterineto tamin'ny fanohanana teo amin'ny Windows
Ahoana no hametrahana ny rindrambaiko WiFi amin'ny Windows 10
Ny Intel Partner dia manazava ny Cascade Lake Xeon Scalable Launch Window
Visual Studio Code 1.29 dia navoaka tamin'ny Finding Multiline
Ampifanaraho amin'ny mozika Laser amin'ny PowerPoint ny mozikao
Download TeamViewer 14 ho an'ny Windows 10
Fidio ny C & C: Alarobia Mena amin'ny alalan'ny Snap ao amin'ny Ubuntu 18.04, 16.04
GitAtomic dia mpanjifa Git GUI ho an'ny rafitra Windows
PyCharm IDE - Mametraka PyCharm 2018.2.5 ao amin'ny Ubuntu Linux
Laptops tsara indrindra: Holiday 2018
Linux Deepin 15.8 dia navotsotra tamin'ny fanatsarana ny fahasamihafana
Sunset Overdrive notaterina ofisialy ho an'ny Windows 10, hanombohana rahampitso
Fivarotana fitaovam-piadiany mora indrindra ho an'ny mpividy voalohany
Action1 Endpoint Security sy Patch Managment - Free Edition
Ubuntu command line Facebook Database CentOS 7 MySQL Twitter fitaovana Fitaovana finday GNOME Apps Ubuntu (rafitra fandidiana) Linux Ubuntu Systems toe-tsaina Chrome Unix SSH Firefox Microsoft Windows CentOS fitaovana SSD bilaogy fikarohana windows update web server rafitra HTTP OS X Company Toetoetra finday avo lenta PDG SEO iPhone MAMAKA "PC rindrambaiko nbsp Unité centrale web browser hametraka Ubuntu 14.04 Screen Users Ubuntu 14.10 Debian Apache Linux Mint paoma IP adiresy app store One ' bilaogy Windows Phone tahirin-kevitra Windows takelaka fikirakirana WordPress raki-daza lalao PPA fanamarinana haino aman-jery sosialy Samsung Galaxy HTTPS Rafitra fikirakirana fifamoivoizana lalao 04 Linux Command Ubuntu 16 File loharano misokatra ram Google famotsorana Time 'App PHP Video Support Plugin 10 Plugins Windows 8 fitaovana Bing YouTube Up " Server endri-javatra vaovao farany Cortana Phone Apple Watch Nginx taona famerenana USB fitaovana finday Samsung Malagasy Bible Microsoft Windows 10 afa-po API Android HTML ubuntu 15.04